Kuchengetedzwa kweAirTags mumaoko evana vari kubvunzwa | Ndinobva mac
Kuchengetedzwa kweAirTags mumaoko evana vari mubvunzo
Nhau dzakasvetuka maawa mashoma apfuura munhau dzakasiyana siyana kusanganisira MacRumors Uye ndezvekuti kuchengetedzeka kweaya maAirTag matsva pavanenge vari mumawoko evana kuri kubvunzwa uye zviri zvese nekuda kwekuti "zvakapusa sei" kubvisa kavha kutsiva kweCR2032 bhatiri mukati. Uye isu tinoisa chinhu chiri nyore mumakotesheni nekuti vamwe vashandisi vanoratidzika kunge vanozviwana zvakati omei uye vamwe zvishoma zvishoma, kunyange zviri nyore chaizvo kubvisa butiro kuti uwane bhatiri.
Izvi zvinoita chitoro cheOffeworks chitoro, bvisa kwenguva pfupi maAirTags mumasherufu avo nekuda kweiyo "yakadzika chengetedzo" inopihwa nechigadzirwa kupokana nekugona kubata kwevana. Iyi Apple tracker yakavhurwa mazuva mashoma apfuura uye kuti mamirioni evashandisi mumaoko avo inoita seisina kuchengetedzeka zvakakwana kune vana uye vakamirira kuongororwa kwekupedzisira kweAustralia Makwikwi neVatengi Commission kuti vatengesezve maAirTag.
Apple, mune zvirevo kuna Gizmodo, yakasimbisa ichidzivirira kuti iyo procesoAirTags bhatiri kutsiva maitiro ndicho chikonzero nei yeAustralia ketani yekutengesa yafunga kubvisa retirarAirTags kubva muzvitoro zvayo kwechinguva asi kuti izvi zvinosangana nezvose zvinodiwa kuchengetedzwa.
MaAirTag akagadzirirwa kusangana nematanho epasi rese ekuchengetedza vana, kusanganisira Australia, nekuda maviri-nhanho kusundira uye kutendeuka mashandiro ekuwana iyo mushandisi-inotsiviwa bhatiri. Isu tiri kunyatsotevera mirau uye tichishanda kuti tione kuti zvigadzirwa zvedu zvinosangana kana kupfuura zviyero zvitsva, kusanganisira izvo zvekunyorera mapakeji, pamberi peiyo nguva inodiwa.
Ichokwadi kuti michina iyi haiwedzeri chero sikuruu yekuchengetedza iyo inodzivirira kuvhurwa kwevhavha uye inotevera kupinda kune CR2032 bhatiri bhatiri, asi zvinoita sekunge Apple haina kutyora chero mirau yazvino uye nzira yainovhurwa nayo hazviite yakapusa kwatiri.nhandare yemwana kuti agone kuivhura. Zvakare, zvinoita kunge zvine njodzi kwatiri kuisa chishandiso mumuromo chaimo kwete kuti ndinogona kubvisa bhatiri ...
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Kuchengetedzwa kweAirTags mumaoko evana vari mubvunzo
Kwete, AirTags haigone kugovana nzvimbo muboka remhuri
Apple Watch inobatsira mukutakura panguva yendege yegungwa